WARBIXIN: 10 Tababare Oo U Sharaxan Shaqada Tababaranimo Ee Barcelona Xilli Uu Cadaadisku Ku Sii Badanayo Quique Setien – Kooxda.com
HomeLa LigaWARBIXIN: 10 Tababare Oo U Sharaxan Shaqada Tababaranimo Ee Barcelona Xilli Uu Cadaadisku Ku Sii Badanayo Quique Setien
July 3, 2020 Abdiwali Adan Jamac La Liga, Wararka Maanta, Warbixino 0
Mustaqbalka tababare Quique Setien ayaa maalinba maalinta ka dambaysa ku sii dhacya god madow xilli uu shaki weyn ku jiro mustaqbalkiisa kooxda Barcelona.
Kooxda difaacanaysa horyaalka la liga ayaa 4 dhibcood ka dambaysa Real Madrid tartanka horyaalka la Liga iyada oo u muuqata mid aan difaacan doonin horyaalka xilli ciyaareedkan.
Sidoo kale waxa jira dhawr dhibaato oo qolka Labiska ah oo uu ugu horeeyo in ay xiddiguhu lumiyeen kalsoonida tababare Quique Setien kadib guuldaradii Celta Vigo.
Wargayska Daily Mail ayaa soo bandhigay 10 tababre oo ugu cad-cad in ay noqdaan tababaraha kooxda hadii shaqada laga caydhiyo kooxda.
Waa Tababaraha ugu cad-cad in uu noqdo tababaraha cusub ee Barcelona hadii uu tababaraha haatan ka tago shaqada waana tababare lala xidhiidhinayay shaqada kooxda kadib markii uu Ernesto Valverde ka tagay kooxda.
Bilowgii xilli ciyaareedkan tababaraha Marcelo Gallardo ayaa si weyn loola xidhiidhinayay Barcelona xilli uu tababaraha reer River Plate ka mid yahay tababarayaasha reer Argentine ee kubad qurux badan soo bandhigay.
Javier Garcia Pimienta:
Tababare Javier Garcia Pimienta ayaa ah tababare aan la garanayn waxana uu haatan tababare u yahay kooxda Barcelona ee da’yarka waxana ay Barcelona taariikh ku leedahay in ay tababarayaasha u soo dalacdo kooxda 1-aad halkii ay suuqa kala soo wareegi lahayd tababare cusub.
Tababarahan ayaa shaqo cajiib ah ka haya xulka qaranka Belguim waxana lala xidhiidhinayay saxiixiisa bilihii ugu dambeeyay iyada oo uu tababaraha reer Spain khibrad u leeyahay horyaalka La Liga.
La xidhiidhinta Barcelona ee tababare Mauricio Pochettino ayaan ahayn mid cusub maadama tababarahan lala xidhiidhinayay kooxda Barcelona tan ilaa markii uu tababaraha u ahaa kooxda Tottenham.
Tababaraha xulka qaranka Holland ahna halyeey u soo ciyaaray kooxda ayaa sidoo kale ka soo muuqday Liiska iyada uu tababarahan xitaa qirtay in uu doonayo in uu tababare u noqdo kooxda barcelona hadii uu ka tago xulka qaranka Holland.
Tababarihii hore ee kooxda Barcelona ayaa sidoo kale ka soo muuqday Liiska isaga oo haatan hogaamiya xulka qaranka Spain laakiin waxa laga yaabaa in uu ogolaado ku soo laabashada Barcelona hadii loo soo bandhigo.
Dookhan ayaa ah mid lama filaan ah marka loo eego in uuna Mikel Arteta Horay u soo hogaamin koox weyn haatana Arsenal hogaaminayo bilo yar waliba ku dhibaatoonayo in uu kooxda ka caawiyo u soo bixista champions League.
Tabaabraha reer Portugal ee kooxda Wolves ee Nuno Espirito Santo ayaa sidoo kale ka soo muuqday Liiska tababaryaasha Barcelona u dhaqaaqi karto hadii ay caydhiso tababareheeda haatan.
Tababarihii hore ee kooxda Juventus Massimiliano Allegri ayaa ah tababare xor ah oo aan wax koox ah hogaamina mana ahan markii ugu horaysay ee Barcelona lala xidhiidhinayo marka loo eego in ay Barcelona doonaysay saxiixiisa ilaa intii uu tababaraha u ahaa Juventus.
Halka Uu Antoine Griezmann Ka Gali Karo Shaxda Arsenal Hadii Uu Ku Soo Biiro Gunners